I-China Flour Blending Manufacture kanye neFektri | I-Chinatown
Okokuqala, ikhwalithi ehlukile namamaki ehlukene kafulawa akhiqizwa egumbini lokugaya athunyelwa emigqonyeni ehlukene yokugcina impahla ngokuhambisa imishini yokugcina. Le mpuphu ibizwa ngokuthi ufulawa oyisisekelo. Ngaphambi kokuba impuphu eyisisekelo ingene endlini yokugcina izimpahla, kufanele ihambisane nezinqubo zokuhlola ufulawa, imitha, ukuhlukaniswa kukazibuthe nokubulala izinambuzane. Lapho kudingeka ukuxuba ufulawa, ufulawa oyisisekelo wezinhlobo eziningana odinga ukufaniswa uyakhishwa emgqonyeni, uhlanganiswe ndawonye ngokwesilinganiso esithile, futhi kunezelwa izithasiselo ezahlukahlukene njengoba kudingeka, bese ufulawa ophelile wenziwa ngemuva kokunyakazisa nokuxuba. Ngokuya ngokwehluka kwezinhlobo ezahlukahlukene zikafulawa oyisisekelo, izilinganiso ezahlukahlukene zofulawa eziyisisekelo ezahlukahlukene, nezithasiselo ezahlukahlukene, amamaki ahlukene noma izinhlobo ezahlukahlukene zikafulawa okhethekile kungaxubaniswa futhi kufezekiswe.
Imishini yokuxuba ufulawa
Amabili Way Valve
Isihlungi seJet Pressure Esiphansi
Ishubhu yokuhambisa eyishubhu
Isilinganiso seFlour Batch
Ukusetshenziswa Kofulawa Wokuxuba (imboni yokucubungula okujulile)
Lolu hlelo lubandakanya ukuhanjiswa kwomoya kanye nokugcinwa kwempuphu eningi, i-ton powder kanye ne-powder encane yephakeji. Yamukela i-PLC + touch screen ukuze ibone ukusatshalaliswa okuzenzakalelayo nokusatshalaliswa kwe-powder, futhi amanzi noma igrisi kungangezwa ngokufanele, okunciphisa ukusebenza futhi kugweme ukungcoliswa kothuli.
Amacala Okuxuba Ufulawa
I-Flour Blending workshop yomgayo kafulawa ixuba ufulawa emigqonyeni ehlukene kafulawa ngokulingana ukuqinisekisa ukuzinza komkhiqizo wokugcina.
I-Flour Blending workshop yomshini wokugaya ufulawa ixuba izinhlobo ezahlukahlukene zikafulawa ngokulingana ukukhiqiza izinhlobo ezahlukene zikafulawa osebenzayo, njengofulawa wokulahla udoti, ufulawa we-noodle nofulawa we-bun.
I-workshop yokukhiqiza yefektri ye-noodle isebenzisa i-steel-stainless steel powder bin kanye ne-batching scale. Ufulawa osemgqonyeni wenqwaba ye-powder uyiswa ngomoya esikalini sokugoqa ukuze kukalwe ngokunembile, okusindisa inqubo yokukhipha imibhalo ngesandla futhi kugweme isimo sokuthi abasebenzi bengeza inani elingalungile likafulawa.
Ku-Flour Blending workshop yefektri yama-noodle, kunezelwa izithako eziningana kufulawa ukukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zama-noodle.
I-Flour Blending workshop yefektri yamabhisikidi ingeza izithako eziningana kufulawa ngobuningi. Yenziwe ngayo yonke insimbi engagqwali futhi ilwa nokugqwala kwebanga lokudla.
Ku-workshop yokukhiqiza yefektri yamabhisikidi, ufulawa wawuzongena kumxube wenhlama wokuxuba ngemuva kokukalwa nokuhlanganiswa.
Olandelayo: Uchungechunge lwe-MLT Degerminator